प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई चलचित्रकर्मी नवल खड्काकाे खुला पत्र | Himal Times
Home विचार/अन्तर्वार्ता प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई चलचित्रकर्मी नवल खड्काकाे खुला पत्र
खुला पत्र / नवल खड्का
सम्माननीय प्रम ओलिज्यू साथै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डज्यू !
सबभन्दा पहिला म मेरो सदिच्छा प्रकट गर्दछु– तपाईंहरु महामानव बन्नुहोस् । “भ्रमण बर्ष स्थगित गरियो, भ्रष्टाचार बर्ष जारी छ” भनेर सामाजिक सञ्जाल टनाटन छ। देख्नु भो होला सुन्नु भो होला। तर भ्रष्टाचारको प्यारामिटरले सगरमाथाको उच्चाई नाघी सक्यो, देख्नु भयो होला।
तर म निवेदन गर्दछु– यस्ता अमानवहरुलाई बालुवाटारमा पोसेर तथा धुम्वराही तथा पेरिस डाँडाले स्याहारेर राख्दा समाजवादको बाटो होइन पार्टी नै आर्यघाट तर्फ लाग्छ।
हामीहरुलाई भनौं– अब पनि ती चोखा भनेर काखीमा बसिराख्नु भए तपाईंहरु प्रति जनताको पुरै मोहभङ्ग हुनेछ। इतिहासमा जुन भूमिका खेलेर आउनु भएको छ ती सबै नामिटानामेट हुनेछन्। यस्तो हुँदा पनि तपाईंहरु दुवैबाट कुनै कदम नचालिनु दुखद छ।
त्यस्तो भ्रष्टाचारीहरुले नैतिकताले नै राजीनामा दिनु पर्ने थियो। के नैतिकता शेरबहादुर तामाङ्गमा मात्रै लागू हुने शव्द हो। यिनीहरुका लागि नैतिकता भन्ने शव्द थिएन। यसर्थ मेरो अनुरोध छ आसन भन्दा माथि र सन्तानमोह छाडेर तिनीहरुलाई कठघरामा उभ्याउनुहोस्।
ती जनताका नजरमा कोरोनाभाइरसका कारणले ढलिसके ती अर्द्धमृतप्रति जनताको कुनै विश्वास छैन। तिनीहरुले सरकारका कुनै राम्रा कार्यबारे चर्चा गरे भने सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता प्रतिक्रिया आउँछन् तपाईंहरुले हेर्नु भएको छ। तर टेर्नु भएको छैन।
अब पनि टेर्नु भएन भने के हुन्छ? विश्वका कैयन भ्रष्टाचारीलाई के भएको थियो त्यही हुन्छ। ईतिहास साक्षी छ ।
चलचित्रकर्मी- नवल खडकाकाेे फेेसबुकबाट साभार
Previous articleस्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिदकाे जिम्मा नेपाली सेनालाई
Next articleकाठमाडौंमा रगत अभाव, स्वैच्छिक रक्तदान गर्न आग्रह
हतारो र चटारोको त्यो अविस्मरणीय दिन
सत्ता साझेदार शीर्ष नेतृत्व बैठक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल